Maxay tahay sababta ay Shabaab uga baxeen Kismaayo
Sheekh Cumar daahir oo ka mid ahaa Maxkamadihii Islaamka kana mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ayaa waxa uu sheegay in sababta keentay in Al Shabaab ay ka baxaan magaalada kismaayo ay tahay awoodii ay lahaayeen oo daciiftay sababo la xiriira dadkii oo nacay kana soo horjeedo, ciidan laaan iyo dhaqaalo daro.
Aqoonyahaanka ayaa waxa uu sheegay in awooda al shabaab ay haatan kusoo aruurtay fulinta dilalka iyo qaraxyada qorsheysan taasi oo uu sheegay in aysan sameeneynin mecno sidaasi u weyn oo laga hortagi hadii ay dowladda isku xilsaarto xasilinta amaanka.
Al Shabaab waxaa la dhihi karaa wey wiiqantay awoodooda waayo Kismaayo waa magaalada kaliya ee ugu weyn oo ay gacanta ku hayeen waa magaalo leh dekad iyo garoon diyaaradeed oo ay ka heli jireen dhaqaalo badan marka waxaa la dhihi karaa waa laga adkaaday Shabaab sidaasi waxaa yiri aqoonyahaanka.
Cumar Daahir ayaa waxa uu intaasi ku daray in looga baahan yahay dowladda Soomaaliya in maamul saldhig wanaagsan leh ay u sameyso magaalada iyo gobolada jubada hoose hadii kale waxa uu xusay in aysan waxba soo kordhineynin qabsashada magaalada oo ay suura gal tahay sida uu yiri inay ka dhacaan dagaalo sokeeye maadaama qabaailo badan ay ku loolamayaan maamulida magaalada al shabaabna ay taasi ka faaideysan karaan mar kale.
Magaalada Kismaayo ayaa waxa ay noqoneysaa magaaladii 9-aad ee ka baxda gacanta Xarakada Al Shabaab, hase ahaatee Shabaab wali waxa ay maamulaan degmooyin iyo deegaano ku yaalla koofurta iyo bartamaha Soomaaliya.